के हो स्वप्नदोष? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के हो स्वप्नदोष?
स्वास्थ्यखबर मंगलबार, चैत १, २०७८, २२:१६:४९
स्वप्नदोष एक शारीरिक प्रक्रिया हो। यो कुनै रोग होईन। स्वप्नदोषको अर्थ निदाएको बेलामा विना सम्भोगक्रिया वीर्य स्वतः स्खलित हुनु हो। धेरैजसो स्वप्नदोष कामुक सपनाको कारणबाट हुन्छ। सम्भोग वा हस्तमैथुन नगरेमा स्वप्नदोष हुन थाल्दछ। स्वप्नदोष एक सामान्य प्राक्रितिक प्रक्रृया हो।
यसको उपचारको लागि चिकित्सकसँग जानु आवश्यक छैन। विवाह भएपछि सम्भोगद्धारा स्वभाविक स्खलन हुन थाल्दछ। तब यो आफैं बन्द हुन्छ। अश्लील साहित्य नपढ्नु, ब्लू फिल्म नहेर्नु, स्त्रीहरुको सम्पर्कमा धेरै नबस्नु, प्रेम र यौन सम्बन्धी कल्पना नगर्नु स्वप्नदोषबाट बच्ने उपाय हुन्। स्वप्नदोष हुने व्यक्तिले राती पिसाब रोकेर बस्नुहुदैन। पेटमा कब्जीयत छ भने तुरुन्त उपचार गर्नुपर्छ। किनभने कब्जीयतले पनि स्वप्नदोषको मात्रालाई बढाउन सघाउ पुर्‍याउँछ।